Cabdiraxmaan Cirro, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Waddani.
HARGEYSA, Somaliland – Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Somaliland ee Waddani, Cabdiraxmaan Cirro, ayaa ka tacsiyeeyay weerarkii shalay ka dhacay Muqdisho, caasimada Soomaaliya.
Cirro oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook-ga ayaa fal "bahalnimo ah" ku tilmaamay is-miidaamintaas oo khasaaro kala duwan sababay.
Hoos ka akhriso qoraalka Cirro
Naxdin iyo tiiraanyo ka weyni ma jirto in la gummaado shacab aan waxba galabsan, ardaydii ahayd ubixii soo kacaayey, xoogsato shaqo tag ah, runtii waxa aan si weyn u tacsiyadeynayaa ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmayba qaraxii bahalnimada iyo ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Ilaahay inta dhimatay naxariistiisa janno haka waraabiyo, inta ku dhaawacantayna caafimaad degdeg ah ha siiyo, waxa aan leeyahay dadka reer Muqdisho ee dhibkaasi soo gaadhay, ha is dhiibina walaalayaal!
"Xamar dhaxal umay helin
In dhiig korkeeda lagu qubo
Xamar dhaxal umay helin
In dadkeeda lagu dhibo..." Abwaan Laabsaalax.
Inta la xaqiijiyey 100 qof oo u badan arday ayaa ku naf-waayey weerarkaas oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxo qarxa oo uu wadday naftii halige.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah argagixisadda ayaa dhacdadaas ku eedeeyay ururka Al-Shabaab.
Cirro ayaa kamid ah siyaasiyiinta Somaliland ee cambaareeya falal liddiga ku ah ammaanka ee ka dhaca Muqdisho, magaala madaxda dalka dhaca Geeska qaaradda hodanka ah ee Afrika.
Wadamadan oo magacyadooda lasoo bandhigay ayaa lagu waramay in ay leeyihiin "danno gaar ah"